कट्रिनाले बनाएकी हुन् दीपिकालाई सुपरस्टार ! - Koshi Online
कोशी अनलाइन सोमबार, पुष ३०, २०७५ मा प्रकाशित
विराटनगर, पुस ३०
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बलिउड हालै सबैभन्दा मंगहो सेलिब्रेटीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छिन् । हालैमात्र जारी भएको चौथो संस्करणको रिपोर्टअनुसार उनी सबैभन्दा महंगा ब्राण्ड सेलेब्रिटीको सूचीको दोस्रो स्थानमा छिन् ।
उक्त सूचीको पहिलो स्थानमा भने भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली रहेका छन् । १०.२५ करोड डलर ब्राण्ड भ्यालुका साथमा दीपिका दोस्रो स्थानमा छिन् । दीपिकाले २१ ब्राण्डको विज्ञापन गरिरहेकी छन् ।
यस्तै उनी बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेत्री पनि हुन् । कुनै फिल्म खेलेको उनले १४ देखि १५ करोड भारू लिने गर्छिन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी अर्की अभिनेत्री कट्रिना कैफको गल्तीको कारण अत्यधिक चर्चामा आएकी हुन् ।
कुनै समय अभिनेता अक्षयकुमार र कट्रिनाको जोडी निकै चर्चामा थियो । ‘नमस्ते लण्डन’पछि कट्रिना कैफलाई धेरै फिल्मबाट प्रस्ताव आएको थियो तर उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् । पछि उक्त फिल्ममा दीपिका पादुकोणले अभिनय गरेकी थिइन्, जुसले दीपिकालाई नै सुपरस्टार बनायो ।
बलिउडमा निकै चर्चामा रहेको फिल्म ‘यह जवानी है दीवानी’को लागि कट्रिनालाई सुरूमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उनले अस्वीकार गरेपछि यस फिल्ममा दीपिका पादुकोणले मौका पाइन् । र, यो फिल्मले एक सय करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो ।
यस्तै चलचित्र ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ पनि कट्रिनाको पोल्टोमा पर्न लागेको चलचित्र हो । शाहरुख खानको साथमा कट्रिनाको जोडी ‘जब तक हे जान’ मा निकै रुचाइएको थियो । त्यसपछि रोहित शेट्टीले यस फिल्मका लागि अफर गरेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरेपछि दीपिका भाग्य चम्कियो ।
यसैगरी ‘रामलीला’ पनि दीपिकाले कट्रिनाको भाग्य तानिन् । यो फिल्मको लागि पनि कट्रिनालाई पहिलो प्रस्ताव गएको थियो तर उनले त्यसका लागि अस्वीकार गरेकी थिइन् । जसका कारण सञ्जयलीला भन्सालीले दीपिकालाई लिए । अहिले दीपिका भन्सालीको पहिलो रोजाईकी अभिनेत्री बनेकी छन् ।
चलचित्र ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ खासै धेरै सफल चलचित्र मानिँदैन । तर, यस फिल्मले कमाई भने ठिकठाक गरेको थियो । कट्रिनाका लागि ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ बाट अफर आयो तर उनले यसलाई पनि रातो सिग्नल देखाइन्् । र, दीपिकाले मौकामा चौका हानिन् ।
रणवीर र दीपकाको अर्को एउटा हिट फिल्म रह्यो ‘बाजीराव मस्तानी’ । यस फिल्ममा कट्रिनाले रणवीरका कारण काम गरिनन् ।
‘जात्रै जात्रा’का निर्माताले ल्याउने भए ‘के घर के डेरा’
सन्नीले आफ्नो गीत सेयर गर्दै लेखिन् नेपाली फिल्मसँग जोडिन पाउँदा खुशी छु
‘द भ्याइस अफ नेपाल सिजन २’ काे नयाँ निर्णायकमा राजु लामा र आस्था राउत
‘साहो’मा निर्देशक सुजितले तीन दर्जन ट्रक र गाडी उडाए
किन बोल्दैनन् सनी देवल र शाहरुख खान ?
विश्वकप क्रिकेट : छक्कामा माेर्गनकाे कीर्तिमान, सर्वाधिक रन खर्चने बलरकाे सूचीमा राशिद
कोपा अमेरिका : भेनेज्वेलासँग भिड्दै आयोजक ब्राजिल, बोलिभिया र पेरु पनि मैदान उत्रदै
उद्योग संगठन र व्यापार संघबीच एकिकरणको प्रस्ताव
हतुवागढीका इन्जिनियर र सव इन्जिनियर ७० हजार घुससहित पक्राउ
लामिडाँडा एयरपोर्टको उडान परिक्षण सफल